Lwesine 24 Juni 2021
Isipika I-Sperso ivela kumagama amabili weSperm noMsindo. Ukuma okuthile kwe-bubble ingilazi nesipika emgodini wayo ekhanda kusho umqondo wobuntu kanye nokungena okujulile komsindo ozungeze imvelo njengomlilo wesidoda sowesilisa ku-ovum yowesifazane ngesikhathi sokuzala. Umgomo ukukhiqiza amandla aphezulu nekhwalithi ephezulu yomsindo ezizungeze imvelo. Uhlelo olungenantambo lwenza umsebenzisi akwazi ukuxhumana nefoni yakhe ephathekayo, i-laptop, amaphilisi namanye amadivayisi kusipika nge-Bluetooth. Lesi sipika sophahla singasetshenziswa ngokukhethekile egumbini lokuhlala, amakamelo okulala nasekamelweni se-TV.
Ucwaningo Nokwakhiwa Kwezakhiwo
Lwesithathu 23 Juni 2021
Ucwaningo Nokwakhiwa Kwezakhiwo Iphrojekthi yokwakhiwa kweTekhnoloji yeTekhnoloji inomhlahlandlela wokuhlanganiswa kwe-ensemble yezakhiwo kwezakhiwo ezizungezile, indawo ethule futhi emnandi. Lokhu kuchazwa kwe-Idea kwenza ukuhlanganiswa kube uphawu lomuntu, okumiselwe ukucwiliswa okudingekile kwabacwaningi abazosebenza kukho, okuvezwe ngezinhloso zayo zepulasitiki nezinhloso ezakhayo. Umklamo odangalisa futhi ohlanganisiwe ophahleni ngohlobo lwe-concave ne-convex cishe uthinta imigqa evundlile evulekile echazayo ngaleyo ndlela, izici eziyinhloko zenkimbinkimbi yokwakha.
Lwesibili 22 Juni 2021
Isihlalo I-Ane stool inezinhlaka eziqinile zokhuni ezibonakala zintanta ngokuvumelanayo, kepha nokho ngokuzimela emilenzeni yamapulangwe, ngaphezulu kohlaka lwensimbi. Umqambi uthi isihlalo, esakhiwe ngesandla sokhuni oluqinisekisiwe lwe-eco-friendly, sakhiwa ngokusebenzisa okuhlukile kwezingcezu eziningi zesimo esisodwa sokhuni zibekwe futhi zisikwe ngendlela enamandla. Lapho lihlala esihlalweni, ukukhuphuka okuncane kwe-angle kuya emuva nokugudluzwa kwama-engeli ezinhlangothini kuqeda ngendlela enikeza isikhundla semvelo, sokuhlala kahle. Isihlalo se-Ane sinamazinga afanele okuxakaniseka nokwakha ukuqeda okuhle.
Msombuluko 21 Juni 2021
Iphakethe Letiye I-Tea Hall Brand, ithatha isithombe sokuchitha futhi isabalalise itiye ngokukhululeka nangokuzithokozisa, umqondo wenqubo yokuphisa itiye, uqine noma ubuthakathaka, uguqula ngokungalindeleki, njengengxenye yokupenda itiye ngenkathi unambitha itiye. Ubuhle obujwayelekile bokuthatha itiye njengoyinki nokusebenzisa umunwe njengosepeni, ukudweba ingqondo yokunwebeka komndeni wetiye lomndeni wehholo lomhlaba ne-landscape. Idizayini yephakethe yasekuqaleni idlulisela umkhathi othokomele, oveza isikhathi esimnandi sokuphila impilo netiye.
Sonto 20 Juni 2021
Ukukhushulwa Komkhiqizo I-Project Yellow yiphrojekthi yobuciko ebanzi eyakha umqondo obonakalayo wezinto zonke uphuzi. Ngokusho kombono osemqoka, kuzokhonjiswa imibukiso emikhulu yangaphandle emadolobheni ahlukahlukene, bese kukhiqizwa uchungechunge lwezinto ezitholwayo namasiko ngesikhathi esisodwa. Njenge-IP ebonakalayo, i-Project Yellow inesithombe esibonakalayo esicindezelayo nohlelo lombala onamandla wokwenza umbono okhiye ohlangene, owenza abantu bangalibaleki. Ilungele ukukhushulwa okukhulu okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, kanye nokuphuma kokuphuma kokubonakalayo, kuyiprojekthi eyingqayizivele yokwakhiwa.
Mgqibelo 19 Juni 2021
Ukubonwa Kwe-Ip I-Project Yellow yiphrojekthi yobuciko ebanzi eyakha umqondo obonakalayo wezinto zonke uphuzi. Ngokusho kombono osemqoka, kuzokhonjiswa imibukiso emikhulu yangaphandle emadolobheni ahlukahlukene, bese kukhiqizwa uchungechunge lwezinto ezitholwayo namasiko ngesikhathi esisodwa. Njenge-IP ebonakalayo, i-Project Yellow inesithombe esibonakalayo esicindezelayo nohlelo lombala onamandla wokwenza umbono okhiye ohlangene, owenza abantu bangalibaleki. Ilungele ukukhushulwa okukhulu okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, kanye nokuphuma kokuphuma kokubonakalayo, kuyiprojekthi eyingqayizivele yokwakhiwa.
Up Ukuqoqwa Lwesine 16 Septhemba
Il Mosnel QdE 2012 Ilebula Le-Sparkling Le-Pack Kanye Lwesithathu 15 Septhemba
The Float I-Ejensi Yezindawo Zokuhlala Inguhlobo Lwesibili 14 Septhemba
Design Ingxoxo kosuku Lwesine 16 Septhemba
Design legend losuku Lwesithathu 15 Septhemba
Umklamo wosuku Lwesibili 14 Septhemba
Umqambi wosuku Msombuluko 13 Septhemba
Iqembu lokuklama losuku Sonto 12 Septhemba
Isipika Ucwaningo Nokwakhiwa Kwezakhiwo Isihlalo Iphakethe Letiye Ukukhushulwa Komkhiqizo Ukubonwa Kwe-Ip